အ သကွ (၁၃) နှဈ နဲ့ ကိုယွ ဝနွ ၅ လ ရှိခဲ့ တဲ့ မှနမွာေ ကှာငွးသူလေး တဈယောကွ အဖှဈ - KhitStyle
အ သကွ (၁၃) နှဈ နဲ့ ကိုယွ ဝနွ ၅ လ ရှိခဲ့ တဲ့ မှနမွာေ ကှာငွးသူလေး တဈယောကွ အဖှဈ
သကွ၁၃နှဈနဲ့ ကိုယဝွနွ(၅)လရှိခဲ့တဲ့ (၇)တနွးကှောငွးသူ မိနွးကလေးရဲ့ အဖှဈ
မိဘဆရာမှား သတိထား သငွ့တဲ့ အသကွ ၁၃ နှဈ နဲ့ ကိုယဝွနွ ၅ လရှိခဲ့တဲ့ ကှောငွးသူမိနွးကလေး တဈယောကအွဖှဈ
မနေ့က ကမှဆေးခနွးကို ultrasound ကှညွ့ဖို့သားအမိနှဈယောကလွာပါတယွ သူတို့သားအမိဝငလွာတုနွးကတော့..ရငသွားတဖကမွရှိ တဲ့ မိခငကွို လှမွးကှညွ့ရငွး.လူနာလို့ထငမွိတာပါ။
နောကတွော့မှ..ကမှသမီးလေးရာသီ မလာတာ 3လလောကရွှိပှီ..ဗိုကမွှာလညွး အလုံးပေါ နွလေို့ဆိုမှ ကလေးဗိုကကွိုစပွးသပကွှညွ့လိုကတွော့..ဗိုကထွဲမှာ ကိုယဝွနကွ 5လပှညွ့ခါနီးပါပှီ..း။
ကလေးရဲ့ အသကကွိုသခှောသိခငွှ လို့မှေးနေ့မေးလိုကမွှ 13နှဈနဲ့ တဈလ..ဗိုကထွဲက ကိုယဝွနကွ 5လ.. .ရှငွးရှငွးပှောရရငွ.အမှှေးတောငသွခှောမပေါကသွေးတဲ့ .မကှနွှာ အေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကှညွ့ပှီး ကမှ ဘယကွနေ စပှောရမလညွးတောငတွှေးမရတော့ပါ
မတတနွိုငအွမကေိုရှငွးပှတော့ပှီး.သမီးရညွးစား ရှိသလားေ ခှာ့မေးတော့..ရညွးစားတော့မရှိ… အပှိုမဟုတတွဲ့ အဆောငနွသေူငယခွငွှး ဆီကေ ဘာငွးဘီယူဝတမွိ သညဟွုပှောသညွ..လုံးဝ မဖှဈနိုငဘွူး..အမှနအွတိုငွးပှောဖို့နညွးနညွးလေး မာနလွိုကတွော့..မှ.တတနွးထဲနေ.သူငယခွငွှး နှငွ့. .ဟုဝနခွံလာလသညွေ။
fbပေါ မွှာ ဟိုတလောကေ ခတစွားနတေဲ့ရကေူးကနထွဲကိုယဝွနခွုနှဈယောကရွတဲ့. မဟုတတွဲ့ post ကို ဖတပွှီး..အမကေို..ဘောငွးဘီ ကိဈစနှငွ့ဖှီးတော့ အူကှောငကွှောငအွမကေ သို့လောသို့လော ဖှဈသညွ…။
ဒီအမနှငွေ့ လှှတထွားလို့မပှီး..ငါဝငပွါမှ ဖှဈမညွ ဆိုပှီး ဆကမွေးမှ..ကမှ ဖငထွိုငရွကကွမှတတွ.. တတနွးတညွးကှောငွးသား..သူငယခွငွှးအခငွှးခငွှး အဆငွ့လောကတွှနှငွေ့ ..အတူနကှသညေတွဲ့ သူတို့ကိုယပွိုငကွှောငွးရဲ့….ညဖကစွာကှညွ့ခှိနတွှမှော. ညဖကအွတနွးလှတတွှထေဲသှားကှသော .အဲသလိုကလေးတှေ…တောတွောမွှားနပေုံရသညွ ..
သူပှောတဲ့ ဘငောွးဘီယူဝတတွဲ့ သူငယခွငွှး ကလညွး ရညွးစားမဟုတပွဲ အတူနကှသညေတွဲ့..ေ နာကတွတှဲကတော့ ရညွးစားပေါ့…7တနွးတှနေောွ တခနွးထဲအတူတူ..ခှိနွးနကှသညေတွဲ့..3တှဲ ကဲ..ကလေးမို့ တခါတလမှေား သလားလို့ကှိမရွမေေးတော့ .ကှိမရွမနညွေးတော့ပါ…
သမီးတို့အတနွးက..အဲသလို ကှိုကွ ကှတာနညွးတယွ 9တနွး 10တနွးဆိုပိုခှိနွးတှေ့ကှတာလို့ပှောတော့ ကမှ ပကလွကလွနွ ကခှငှလွာသညွ…
မီတာခမှားလို့ ညဖကကွှောငွးအပေါ ထွပတွှေ မီးပိတထွားတော့ ဘိတှဖှဈကေုနကွှပှီထငွ… .ဒါတောငွ…ကလေးကသှကလွကခွကှခွှာပုံ.သိပမွပေါ ွေ ဘာဒွါဆောငကွှေးကလညွး..မနညွးပါ.
တောရွုံမိဘ မထားနိုငတွဲ့အနအထေားပါ.. .ဘွဒေါနှငွ့ ကိုယပွိုငကွှောငွးတှဲ ဖှငွ့ထားပါသညွ. သးသေးခှာခှာနရောလညွးမဟုတပွါ ဒီကိဈစမှိုးက…ကမှမှ ဖှငွ့မပှောလငွှ. .ကိုယွ့ကလေးအတှငွးရေးမို့ ဖုနွးဖိရငွး.. အခှားမိဘ..သတိမထားမိဖှဈနမှောရော သားမှေးထားသူတှရေော…
သမီးမှေးထားသူတှရေောေ ကှာငွးထောငထွားကှသော..သူငယခွငွှး တှရေောကို သတငွးပေး ခငှရွှရွေးပါသညွ…
လူနာကို ငဲ့ညာသောအားဖှငွ.အမေးအဖှမှေားကို.လှော့ရှရွေးပါ‌သွလညွေး.ညနေ ဆေးခနွးက..အပှနမွှာ.ကမှ မလှုပနွိုငအွောငပွငွ.ကှောကစွရာ..အဖှမှေားရခဲ့ပါသညွ
မိဘမှား..ဆရာမှား..ခတွကေို..သတိထားကှပါ ညဘကစွာကကှဝွိုငွးမှားကို..သတိထားကှပါ စာသငကွှောငွး..စာသငခွနွးမှားကိုလညွး.. .သတထိားကှပါလို့…..သတိပေးပါရစေ